तपाइको मिर्गौलामा समस्या त छैन ? - Kantipath.com
तपाइको मिर्गौलामा समस्या त छैन ?
काठमाडौं । ‘बाहिर त कहाँ पानी पिउनु पटकपटक शौचालय जानुपर्छ, मत घरमा मात्र पानी पिउँछु ।’ यदि हामीमध्ये कसैले यस्तोखालको बानी अपनाएका छौं भने ख्याल राखौं आफूले आफ्नै मिर्गौला बिगार्दै छौं ।
पछिल्लो समय आम्दानीका लागि विदेशिएका युवाको मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि वर्षदिन नबित्दै स्वदेश फर्किनुपरेको घटना सार्वजनिक हुन थालेको छ ।
जाँदा चिकित्सकको प्रतिवेदन राम्रो आएपनि खाडीमुलुकमा पुगेपछि त्यहाँ हुने जलवियोजनका कारण मिर्गौलामा समस्या देखिएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ ।
खाडीमुलुकमा गएका युवा लामो समयसम्म काम गर्ने, आवश्यक मात्रामा पानी नपिउने र शरीरको थकाइ–दुखाइबाट छुटकारा पाउन पेनकिलर (नदुख्ने औषधि) खाने र अत्याधिक मासु सेवन गर्ने गरेकाले धेरैको मिर्गौलामा समस्या देखिएको राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. ऋषिराम काफ्ले बताउँछन् ।
शरीरमा जम्मा हुने दूषितपदार्थ छानेर बाहिर निकाल्नु मिर्गौलाको मुख्य काम हो । यसबाहेक मिर्गौलाले हर्मोन पैदा गर्छ । रगत बन्नका लागि आवश्यक हर्मोन पनि यसले बनाउँछ । शरीरको आन्तरिक वातावरण मिलाउने काम मिर्गौला र फोक्सोको हो । हामीले खाएको खानाबाट आवश्यक पोषण लिने र नचाहिने तत्व फाल्ने काम मिर्गौलाको हो ।
तर, पर्याप्त पानी पिउँदा मिर्गौलाले काम गर्न छोडेकाले नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था बढ्न थालेको हो । पानीमात्र होइन, खानामा आएको परिवर्तनले मोटोपनले पनि मिर्गौला खराबीको जोखिम बढाएको छ ।
मोटोपनले पनि मिर्गौला खराब गर्ने भएकाले खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्ने सम्बद्ध चिकित्सकको भनाइ छ । अनियन्त्रित खानपान र व्यायामको कमीका कारण मोटोपन बढ्दै गएको हो । त्यसरी मोटोपन हुनु मिर्गौलामा समस्या हुने संकेत बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. दिव्यसिंह ठकुरी मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामीमा पनि मिर्गौलामा समस्या बढी देखिने बताउँछन् ।
यस्ता कारणलेमात्र पनि मिर्गौलामा खराबी नदेखिने भएकाले बेलाबेलामा पिसाब र रगत जाँच गरी मिर्गौैलाको अवस्थाबारे थाहापाइ राख्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
हामीले २४ घन्टामा कम्तीमा दुई लिटर पिसाब फेर्नु आवश्यक छ । तर, मिर्गौलामा कुनै समस्या भए पिसाब कम हुँदै जान्छ र यसको रङ पनि फरक हुन्छ ।
पिसाबमा फिँज देखिन्छ, जिउ सुनिन्छ, स्वास फेर्न गार्हो हुन्छ, रक्तचाप बढ्छ, खानामा रुची घट्दै जान्छ र खानै मन नलाग्ने पनि हुन्छ । यीमध्ये कुनैपनि समस्या छ भने तुरुन्त जाँच गराउनुपर्छ ।
नेपालमा १२ प्रतिशत मानिसलाई मधुमेह भएको प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमध्ये ३५ देखि ४० प्रतिशतको मिर्गौला खराब हुन्छ ।
रक्तचाप भएका १५ देखि २० प्रतिशतको पनि मिर्गौला खराब हुने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् ।
डा. ठकुरीकाअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब तीन हजार अन्तिम अवस्थाका मिर्गौलाका नयाँ रोगी थपिने गरेको र उनीहरु डायलासिस वा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थाका हुन्छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनकाअनुसार प्रत्येक १० मध्ये एकजनालाई कुनै न कुनै प्रकारको मिर्गौलासम्बन्धी समस्या हुन्छ ।
त्यसैले मिर्गाैला स्वस्थ राख्न सन्तुलित खानपान र पर्याप्त पानी पिउनुका साथै व्यायाम गरेर शरीरलाई सक्रिय राख्नुपर्नेमा उनको सुझाव छ । समयमै ध्यान पुर्‍याउनसके सबै मिर्गौला रोग निको हुने हुन्छ ।
मिर्गौलाको उपचार महँगो भएकाले नेपालीले सहजरुपमा उपचार पाउन सकून् भनेर डायलासिसजस्तै आगामी वर्षदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा पनि निःशुल्क गर्ने तयारी गरिरहेको स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा बताउँछन् ।
हाल नेपालका ४३ सरकारी तथा निजी अस्पतालबाट डायलासिस सेवा तथा वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर र ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध छ ।
सन् २००६ बाट विश्वमा हरेक वर्षको मार्चको दोस्रो विहीबार विश्व मिर्गौला दिवस मनाउन थालिएको हो ।
यस वर्ष पनि मिर्गौला रोग र मोटोपन ‘स्वस्थ मिर्गौलाको लागि स्वस्थ जीवनशैली’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि यो दिवस मनाइँदै छ ।
Previous Previous post: बालबालिका स्याहार गृहमा आगलागी, १९ किशोरीको मृत्यु
Next Next post: Cho-La Pass at Khumjung becoming risky
आइमाम सञ्चालनमा आएपछि कुपोषित बालबालिका स्वस्थ हुँदै
एसइई को नतिजा भोलि बिहान सार्वजनिक गर्ने
महिलाले आफूलाई तन्दुरुस्त र फुर्तिलो राख्न यसो गर्नुहोस !